Kootidiivwaar waancaa Afrikaa 2015n Shaampiyoonaa taate
Monday, 09 February 2015 11:27
Finfinnee Guraandhala 02, 2007(Oromiyaa) Dorgommiin waancaa Afrikaa 30ffaa kaleessa galgala xumurameera.
Sirna Xumuraa irratti kan morkatan garee Gaanaafi Kootiidvwaar yammuu ta’an Kootidiivwaar moo’achuun Shaampiyoonaa ta’uuf carrooftee jirti.
Sa’aatiin idilee 0fi0n kan xumurame yammuu ta’u rukuttaa addabbiitiin Kootiidiivwaar 9fi8n moo’achuu dandeesse.
Kootiidiivwaar Waancaa Afrikaa yoo of harka galfattu inni ammaa kun 2ffaa akka ta’e beekameera.
Ijiptitti morkiiwwan kubbaa miillaa yeroo hinmurtoofneef achi butte
Monday, 09 February 2015 11:23
Finfinnee: Gurraandhala 02, 2007 (Oromiyaa) Kaleessa Kaayiroo Isteediyamii Diffeensiitti walitti-bu’iinsi ka’ee namoonni 22 lubbuunsaanii darbuusaanii Ijipt murtoo kana kan murteessite.
Biyyatiitti maqaa guddaa kan qabu Zaamaalikii fi morkataansaa ‘ENPP’ osoo taphataa jiraniiti jeequmsichi kan ka’e.
Ka’umsi jequmsichaas balballi istaadiyamichaa tokkichi qofti banamuu akka ta’e deggartoonni himaniiru.
Ijipt bara Faranjootaa 2012tti morkii Poort Saayiditti tureen daawwattoonni kubbaa miillaa 74 du’anii liigiin biyyattii akka dhaabbatu murteessuunshee niyaadatama.
Walitti-bu’iinsa kaleessaan deggartoonni 20 ol balaan irra qaqqabuu akka hinoolle BBC’n namoota ijaan argan wabeeffatee gabaaseera.
Tapha xumuraa Waancaa Afriikaa Gaanaan Ayivoorii Koostiin morkatti
Friday, 06 February 2015 12:37
Finfinnee: Amajjii 29, 2007 (Oromiya) Waancaa Afriikaa 2015’niin Gaanaan qabxii xumuraan ishee qaqqabsiise Ayivorii Koost waliin morkachuu ishee dandeessisu galmeessiste.
Gaanaan kaleessa galgala sa’a 4 irratti tapha Ikuwaatooriyaal Giinii waliin taphatte 3 fi 0’n moo’achuun xumuraaf dabarteetti.
Urjiiwwan gugurraaleef obboleewwan lamaan Jordaanii fi Andiree Ayaw akkasumas Mubaarak Waakaasoo golii galmeessisaniiru.
Dilbata dhufu Gaanaan Ayvoorii Koost waliin waancaaf taphachuusaanii dura Ikuwaatooriyaal Giiniin Rippablika Koongoo waliin sadarkaaf nitaphatu.
Taphi Gaanaa fi Ikuwaatooriyaal Giinii kaleessaa moo’amuu biyya keessumeeteen xumuramuun wal-qabatee walitti bu’iinsa uumameen taphichi naannoo sa’atii walakkaaf gidduutti dhaabbatee ture; poolisiin gaasii nama boossisuu gadhiisuun fi helikooftaraan dirree naanna’uun taphichi akka itti-fufu taasiseera.
‘CAF’ deggartoonni Ikuwaatooriyaal Giinii jeequusaaniif addabbii dabarsuu akka danda’u eegama.
Waancaa Afriikaa: Ayivorii Koostii fi Rippablika Dimookraatawaa Koongoo galagla har’aa wal-morkatu
Friday, 06 February 2015 12:36
Finfinnee: Amajjii 27, 2007 (Oromiya) Tapha walakkaa maayii Waancaa Afriikaa 2015 - Ayivoorii Koostii fi Rippablika Dimookraatawaa Koongoo har’a galgala wal-morkatu.
Tapha galgala sa’a 4 irratti Isteediyamii Baataatti geggeeffamu kana gareen moo’ate xumuraaf darbuusaa nimirkaneeffata.
Leenjisaan Ayivoorii Koost hervee Reenaald koongoof tilmaama xiqqaa kennuun keenya akka moo’amnu nu taasisa wayita jedhan, gitisaanii Koongoo Filoorant moo’achuuf waan gochuu qabnu mara dirreerratti niagarsiisna jedhaniiru.
Waldaan Atileetoota Itiyoophiyaa hundeeffameera
Friday, 06 February 2015 12:33
Finfinnee Amajjii 27,2007(Oromiya) Waldaan Atileetoota Itiyoophiyaa dhimma Atileetoota biyyattii irratti xiyeeffachuudhaan hojjetu hundeeffameera.
Federeeshiniin Atileetiksii Itiyoophiyaatis waldichaaf beekkamtii akka kenne beekameera.
Waldichi tibbana Hoteela biheeraawiitti bakka bu’oonni Atileetoota Finfinneefi Naannolee iddoo argamanitti kan hundeeffame.
Wal ga’ii hundeeffama waldichaa irratti seera ittiin bulmaataa irratti erga mari’atamee booda fooyyessa tokko tokko taasisuun akka ragga’u taasifameera.
Filannoon pireezidaantii waldichaafi miseensoota hojii raawwachiiftuu waldichaas kan deemsifame yammuu ta’u akkaatuma kanaan Atileet Silashii Sihin Oromiyaa irraa pireezidaantii waldichaa ta’uun kan filatame yammuu ta’u Atileet Masarat Daffaar Finfinnee irraa itti aantuu pireezidaantii waldichaa ta’uun filatamtee jirti.
Torbe Kana 47258
Ji'a Kana 91099
01/05/07 irraa eggalee 7193968
Kan Amma Daawwachaa Jiran 41